I-BrightTag: Ipulatifomu Yokulawulwa Kwethegi Yamabhizinisi | Martech Zone
NgoLwesine, ngo-Okthoba 31, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Izingqinamba ezimbili ochwepheshe bokumaketha kwamabhizinisi abalwa njalo ku-inthanethi yikhono lokunciphisa izikhathi zokulayisha zesayithi LABO kanye nekhono lokuhambisa ngokushesha izinketho ezingeziwe zokumaka kuzakhiwo zabo zewebhu. Inkampani ejwayelekile yebhizinisi ingaba nohlelo lokusatshalaliswa oluthatha amasonto noma ngisho nezinyanga ukuthola ushintsho kusayithi.
Elinye lamakhasimende ethu ebhizinisi lihlanganisiwe I-BrightTagUkuphathwa kwamathegi ebhizinisi kusayithi labo ngemiphumela emihle. Isiza sabo besisebenza kaningi analytics imibhalo ngaphezu kwamanye amathuluzi. Ngokufaka wonke amathegi ku-BrightTag, isikhathi sabo sokulayisha sincishiswe kakhulu - futhi bekwazi ukuphatha ukuthi yimaphi amathuluzi ahlanganisiwe nokuthi ngqo kusuka ku-BrightTag ngaphandle kokufaka iphutha eqenjini labo lewebhusayithi.
Nayi ividiyo emfushane evela kuma-CEC Merrick Momentum Awards ka-2013.
I-BrightTag Tag Management ikukhulula emikhawulweni yamathegi ngakho-ke uchitha isikhathi esincane ukhipha ikhodi nesikhathi esiningi usungula. Ithegi eyodwa ikwenza konke.
Izici Zokulawulwa Kwethegi Yamabhizinisi
Lungiselela futhi uvuselele amathegi ngemizuzwana. Hlukana nomjikelezo wokuthuthuka kwe-IT futhi uphathe amathegi kumugqa wakho wesikhathi. Ukuhamba komsebenzi kweBrightTag kukuvumela ukuthi uphathe kalula amathegi noma kunini futhi noma ngabe ukulungele. Dala umaki ngokushesha ongawuhlola kuqala, usebenze futhi ungasebenzi, noma kunini lapho udinga khona.
Sheshisa isiza sakho ngaphandle kokulahlekelwa idatha ebalulekile. I-Patent Server-Direct kanye ne-parallel tag yokulayisha ithegi iphakethe elilodwa lokusebenza. IBlackTag's Server-Direct idlulisela idatha kozakwethu ngesikhathi sangempela, inciphisa inani lamathegi kusayithi lakho futhi imise ukulahleka kwedatha kumathrekhi ayo. IBrightTag iphinde ilayishe ikhodi yamathegi ngobuhlakani ngaphandle kokuvimba okuqukethwe kwamakhasi ukuze abasebenzisi bakho bangabambeki belinde omaki abahamba kancane.
Thwebula zonke izinto zomsebenzisi nedatha kusayithi lakho bese wabelana ngalo nabalingani bakho. Cwaninga amabhuku lapho kuqoqwa khona idatha nokuthi ngubani othola idatha ngokuchofoza okukodwa.
Imithetho yebhizinisi ikuvumela ukuthi unqume ukuthi omaki bamathegi bomlilo nini, balawulwa kanjani umkhankaso, qhathanisa abathengisi ngamakhanda, yenza kahle imizamo yakho yokumaketha, nokuningi. Khetha kusuka kusethi yemithetho yokudubula ebekelwe kusengaphambili noma udale eyakho nomakhi wemithetho enemibandela.
Ukuqapha kwethegi yesikhathi sangempela nokubika. Thola ukuqonda okusheshayo kuwo wonke amathegi kuwo wonke amakhasi esayithi lakho. Ukubukwa kwedeshibhodi okulula kukunikeza isikhumba sempilo kumathegi wakho, ngenkathi ukuqapha kwethu API ikuvumela ukuthi ufake izibalo ngqo kumathuluzi akho.
Impendulo yephutha lomaki osheshayo, idatha elahlekile kancane. Khomba uphinde ulungise izingqinamba zekhwalithi yedatha ngokushesha ngokubika kwephutha lesikhathi sangempela. Iqiniso ukuthi ikhodi yamathegi esebenzisa isiphequluli inamathuba ayi-10x okungaholela emaphutheni. Ukubikwa kwephutha lesikhathi sangempela kukusiza ukukhomba ngokushesha okungahambelani, uthathe isenzo futhi uvimbele ukulahleka kwedatha.
Ikhathalogi yozakwethu. Ngokuhlanganiswa kokulungiswa nokuya kwamakhulu wamathegi ozakwethu, uvukile futhi usebenza ngemizuzu. Amathuluzi okusesha enembile akusiza ukuthi uthole kalula ozakwenu abathengisi ngamagama noma ngekhodi, ngenkathi i-Smart Custom Tag yethu ikunika ukuvumelana nezimo lapho uyidinga.
Lungiselela izinqubomgomo zobumfihlo evumela abasebenzisi ukuthi bakhethe ukuphuma. Ngokulawulwa kobumfihlo komhlaba wonke kushintsha njalo, udinga ithuluzi eliguqukayo elingadingi ukuthi uhlukanise iwebhusayithi yakho njalo lapho umthetho ushintsha. Hlonipha ukukhetha kwamakhasimende akho maqondana nokuqoqwa kwedatha bese uthola amathegi kulayini.
ubuchwepheshe. Lapho amathegi eba yinkohliso, iBrightTag ineqembu labachwepheshe bokumaka abakubone konke futhi bakunikeze izinsiza ozidingayo.
Tags: engeza lokhubrighttagizisekeloI-google analyticskenshoom6dukukhishwai-quantityisisusa sesayithiukumakatagsutshelebaphendukelaimvu
Ingabe Abathengisi Bokuqukethwe Bakulungele Ukuphazamiseka?